Ntuziaka maka Ngwọta Ọrụ Lone site na Industrylọ Ọrụ (A10005) | Singapore Top Mini GPS Personal Tracker maka Autism / Autistic Kids & Dementia okenye
Ndị ọrụ na-enweghị ọrụ na ngalaba dị iche iche na-eche ihe egwu dị iche iche, ọ bụ ọrụ nke onye were gị n'ọrụ ichedo ha site n'ịhụ na nchekwa ha n'agbanyeghị ihe ha na-eme. Ize ndụ ndị dịkarịsịrị ala ebe naanị mmadụ na-arụ ọrụ nwere ike ịdị site na mgbadaruo ọkụ ma ọ bụ ọbụna mkpọmkpọ ebe na saịtị. Ya mere nyocha ihe egwu dị oke mkpa, ụlọ ọrụ ga-enwerịrị ọnọdụ ebe ha na-arụ ọrụ ma mara ihe ọghọm ndị ọrụ ha nwere ike ị nweta wee nweta ihe ngwọta ha. Iji teknụzụ eme ihe n’oge a n’oge na-adịbeghị anya aghọọla ihe mere ka ọnụ ọgụgụ ndị ọrụ owu na-aga. Ọ bụ na ekwenye na mberede enwere ngwaọrụ ha nwere ike ịdabere na ya nke ga-ekwe nkwa nchekwa ha ma relay ozi SOS n'ụzọ arụmọrụ ma ọ bụrụ na ihe ọ bụla ga-eme. Anyị ga na-elele ụfọdụ ụlọ ọrụ, ihe egwu ha na-eche ihu na ihe ngwọta nwere nnukwu ohere ịgbanwe ihe. Ulo oru ndi a:
Ulo oru ugbo: ndị ọrụ naanị na ngalaba ọrụ ubi na-arụ ọrụ na ụmụ anụmanụ ma ọ bụ igwe na-arụ ọrụ, ndị ọrụ a na-emetụta ọtụtụ ihe ize ndụ ka ha na-arụ ọrụ. Na UK ọrụ ugbo nwere okpukpu iri na asatọ karịa ikpe ndị metụtara mmerụ ahụ na-egbu egbu. Agbanyeghị nsogbu ahụike ahụike nke ndị ọrụ naanị a agaghị eleghara anya. Enwere ọtụtụ ihe egwu dị iche iche na-eche ndị ọrụ na ugbo, ihe egwu ndị a na - esite n'ịrụ ọrụ dịka iji ugbo ala na - arụ ọrụ na ugbo ala ma jiri aka na - agagharị. Dabere na akụkọ banyere nchekwa ahụike na UK ndị mmadụ na-emeso ụmụ anụmanụ nwere nnukwu ihe mmerụ ahụ. Ihe egwu ndị a nwere ike ịgụnye. Fọdụ ihe egwu dị na ya bụ:
Allsdapụ site na elu dị elu nwere ike ibute mmerụ ahụ na-egbu egbu, na-adọkpụpụta site na ngwụrọ ngwa ngwa ma ọ bụ ndekọ na-akpata ọnwụ 3 ọzọ na 2017 na UK. Ihe yiri nke ahụ nwere ike ime ebe ọ bụla n'ụwa.
Ubi ndị ahụ na-adịgide ka ọ na - arụ ọrụ na anụmanụ, ha na ehi na - arụ ọrụ bụ ihe kacha egbu egbu n’afọ 2017. Ihe ruru mmadụ iri atọ na abụọ nwụrụ.
Ndị na-anya traktọ nwere ike ịkụ ndị ọrụ ma merụọ ha ahụ ma ọ bụ gbuo ha. Enwekwara nnukwu ihe ọghọm maka ndị na-akwọ ụgbọala nchekwa na ụgbọala na-ebugharị dị mkpa.
A ga-enyocha ma lebara nsogbu ndị a anya mgbe ha na-ekepụta ihe iji chebe nchekwa ndị ọrụ, iduzi ọzụzụ mgbe niile nwere ike ịba uru. Ekwesịrị ilebara mgbanwe oge anya, ekwesịrị inwe mmelite na njikwa anụmanụ na akụrụngwa eji. Ekwentị na akụrụngwa nwere ụgbọala ga-arụrịrị nke ọma ma rụọ ọrụ, a ga-enyerịrị uwe na-enye nchebe. Ekwesịrị ịtụle ọrụ niile nke ọma ma ọ bụrụ na ha ga-achọ ka ha na-elekọta ma ọ bụ jikọtara ha na sistekọ enyi iji wee rụọ ọrụ ahụ. Ọzọkwa, hụ na sistemụ nlere na nlele na-arụ ọrụ nke ọma. Ihe kachasị mkpa iji ihe nchekwa nchekwa nke ndị ọrụ na-eme ka usoro ahụ dị mfe ma dị irè. Ihe kacha mma ịdabere na ya bụ teknụzụ.
Ulo Ngwuputa: onye obula nke nwere ma obu jikwaa ihe a na - a n’agha na - elebara anya n’aka ihe ojoo di n’onye obula n’arusi oru obula. A na-eme ihe iji hụ na ọnọdụ a na-achịkwa, ebe ị na-arụ ọrụ n'okpuruala enwere mmebe iwu maka ndị ọrụ na-arụ ọrụ naanị ka aga-enyocha ma na-eleta ya mgbe ọ bụla elekere abụọ. Dabere n'ụdị ihe dị ize ndụ nke ịrụ ọrụ naanị ebe, yabụ enweghị ọrụ kwesịrị ịnọ naanị ya yana mgbe gị na ndị ọzọ na-arụ ọrụ ga-anọrịrị n'usoro ha. Mgbe ị na-arụ ọrụ n’ebe a na-egwupụta ihe dị n’ime ala, ọ dị mkpa ị na-agbaso iwu na-agbachi obodo ma ọ bụ iwu steeti a na-egwupụta akụ. Ihe egwu ụfọdụ dị n’ịrụ ọrụ n’ebe a na-egwuputa ihe bụ:
Iku ahihia: uzuzu uhere a nwere ike imebi ihe ma mebie onye oru ya na nkeji
Ihe egwu kemịkal
Mgbe ndị ọrụ nlekọta na-arụ ọrụ n'ebe a na-egwu mmanụ, ha kwesịrị ịhụ na:
Onwere ihe niile maara maka nnukwu ihe ọghọm dị na ya nakwa na a na-agbado nkwukọrịta niile
Ekwesịrị ime usoro niile iji chịkwaa ihe ndị dị ize ndụ ma belata ihe egwu metụtara ọrụ
Ha ga-amatarịrị ngwaọrụ nchekwa dị mma yana ebe ọ dị.
Mgbe onye ọrụ daa, ọ dị mkpa ọ ga-enweta nlebara anya ozugbo enwere ike. A ga-eme ihe iji belata oge n'etiti ihe ọghọm na nlekọta ahụike. Measuresfọdụ n'ime usoro ndị a bụ:
Ekwesịrị iji kamera onyunyo vidiyo
Ndị na-arụ ọrụ na-anọkarị n'etiti ndị ọzọ na-egwupụta ihe n'ime ala
Ekwesịrị iji ngwaọrụ nkwukọrịta redio redio dị abụọ
Enwere ike iji igwe mkpuchite okpu azụ nwere ike iji.
Ụlọ ọrụ mmepụta ihe: ndị na-arụ ọrụ na ọrụ ahụ na-eche nsogbu pụrụ iche nke ihe egwu na mmekọrịta gburugburu ebe obibi ọgụ, nke a gụnyere izu ohi na mmerụ ahụ saịtị. Odi ihe ndi ozo na acho oru owu ma obu inwe oru n’obere oru, obu ihe n’iru dika: iwulite ihe ohuru, imeghari ulo ndi ewuru ma obu imezi ihe diri. Ndị na-arụ ọrụ ụlọ na-abụkarị ndị na-arụ ọrụ n’ebe dị elu karịa elu ala ma nke a nwere ike ịdị oke egwu. Withrụ ọrụ na igwe na arụ ọrụ na etinyekwa ya n'ihe egwu dị egwu na gburugburu ebe obibi. Dabere na ọnụ ọgụgụ ndị ọrụ ọnụ ọgụgụ US; dara, mkpọda ma ọ bụ njem mere ka ndị ọrụ 699 gbuo ya na 2013. Tụkwasị na nke ahụ, otu akụkọ ahụ kwuru na n'otu afọ ahụ 717 ọnwụ na-akpata ọrụ sitere na kọntaktị na ihe dị nkọ. Ndị ọrụ na-enweghị ego na-arụ ọrụ nke onwe ha n’enweghị onye nọ ha nso iji lekọta ha ma ọ bụdị gwa ha ma ọ bụrụ na ihe ọ bụla adịghị mma. Enwere ihe anọ na - eme ka ndị ọrụ nwụọ na saịtị ndị iwu. A na-akpọ ha aha ha dị ka egbu egbu anọ, ha bụ:
Electrocution (ihe dị ka 9%)
N'ịbụ onye ihe kụrụ ihe (ihe karịrị 10%)
Ọdịda (ihe karịrị 36%)
A na - ejide n'etiti akụrụngwa ụlọ ọrụ (2.5%)
Ọ bụ ezie na ndị ọrụ a na-eche ihe ize ndụ dị ukwuu gburugburu ebe obibi karịa ọtụtụ ụlọ ọrụ ndị ọzọ, ọnweghị oke ụdị ụdị a. N'ihi ọdịdị nke ọrụ ha na oge ọrụ adịghị njọ ka ha na-echekwa ihe ize ndụ mmekọrịta. Ọ dị ha mkpa ị attentiona ntị na gburugburu ha na ihe ọ bụla na-eme gburugburu ha.
N'ihi ọdịdị nke ọrụ nke onye ọrụ naanị ya, ọ dị mkpa na ha nwere ezigbo ezigbo ndị ọrụ nwere ike inye aka wepụ ihe egwu dị na ọrụ ndị a. Ngwaọrụ ụfọdụ nke njikwa ahụ nwere ike iji rụọ ọrụ bụ:
Shụ na ndị ọrụ na-eyiri mkpanaka nchebe ọ bụla
Ọzụzụ ahụike na nchekwa
Kọwaa akara ngosi
Idozi ya ma dozie ya
Nyocha nke ngwaọrụ na akụrụngwa oge niile
Ndị nwute ịda
Usoro Nyochaa Nchedo: nke a pụtara na onye nche na-enyocha oge niile site na ịzaghachi ozugbo na akpaaka
Ngwunye SOS: enwere ike iji zipu mkpu mgbe a na-emegbu onye ọrụ mgbe ọ nọ
Nrụpụta ụlọ ọrụ: ụlọ ọrụ a na-arụ ọrụ nke ịtụgharị akụrụngwa na ngwaahịa bara uru, ndị otu na-arụ ọrụ na ihe dị n'okpuru ala 20 nke gụnyere akwụkwọ, plastik, nri, elektrọnik na biotech & pharma. Iji nweta ọrụ ị kwesịrị ịrụ, ndị ọrụ kwesịrị iji akụrụngwa dị arọ na-arụ ọrụ ogologo oge iji rụọ ọrụ. Hụ na ahụike ndị ọrụ nọ na ụlọ ọrụ a dị ezigbo mkpa, ndị ọrụ a bụ ihe kachasị mkpa maka ụlọ ọrụ ọ bụla. Dabere na ọnụ ọgụgụ ndị ọrụ na United States, ụlọ ọrụ a na-akọkarị ihe karịrị ọrụ 300 na-akpata kwa afọ. Ọzọkwa na 2013 na 2014 dịka ndị ọrụ nchekwa ahụike na-ahụ maka nchekwa ahụike ruru ihe dịka 10% nke ndị ọrụ aka ọrụ UK na UK nwụrụ. Ọtụtụ puku ndị ọrụ kwa afọ nwere ihe mberede na-eme ka ha nwee nkwarụ na-adịgide adịgide, ọtụtụ n'ime ha enweghị ike ịrụ ọrụ maka ndụ. Ikike izipu ihe omume ngwa ngwa nwere ike belata nhụjuanya nke ndị ọrụ owu na-eche maka enyemaka ma belata mmerụ ahụ ogologo oge. Settingfọdụ nwere ọrụ dị ka ahịhịa kemịkalụ na-eweta ihe egwu karịa ndị ọzọ. Ihe egwu nke mgbaze mmiri na ikpughe na-agbakwunye na ngwa ngwa nke amụma nchekwa ọrụ dị mma. Ndị na-eme ọrụ ga-ahụrịrị na onye ọ bụla nke ji naanị ngwá ọrụ na-arụ ọrụ nwere ezigbo nchekwa.
Iji kpuchido ahụike ndị ọrụ naanị ya, ọ dị mkpa na ụlọ ọrụ mbụ buru ụzọ chọpụta ndị ọrụ niile na-arụ ọrụ na-arụ ọrụ n'okpuru ha tupu ịmalite ụkpụrụ iji chebe ahụike ha. Nke a na - enyere ha aka ịma ụkpụrụ nchekwa dị mkpa iji, ndị nchịkwa anaghị amata ndị ha na ha na - arụ ọrụ ma ọ bụ ndị otu ha na - arụkọ ọrụ. Mata akụkụ ndị nwere ike ịbawanye ọghọm dị mkpa. Na-eme nyocha ihe egwu dị oke mkpa makana ọ na-enye gị ohere ịmara ihe ọghọm na-eche ihu ma na-enyere gị aka ịnwe ya n'ụzọ ziri ezi. Iwu nchekwa ndị ọrụ anaghị adịkwa mkpa ịnwe ebe ọ nwere ihe ọghọm akọwapụtara. Ndị ọrụ na-enweghịzi ego kwesịrị iji ụdị teknụzụ kachasị ọhụrụ maka ọrụ ha. Ekwesịrị imepụta ụlọ ọrụ na-emepụta ihe ga-adaba na ngwaọrụ ekwentị ga-ekwe ka azịza ngwa ngwa mgbe ihe mere. Ndị na-arụ ọrụ na-arụ ọrụ na-arụ ọrụ na-echekarị ihe egwu karịa ndị ọrụ otu, ọ dị ezigbo mkpa na ụlọ ọrụ nwere ezigbo amụma yana yana ụdị ọrụ onye ọrụ.
eletrik: ịrụ ọrụ na ọkụ elektrik nwere ike ịdị oke egwu, ndị na-arụ ọrụ n'ụlọ ọrụ na-ekesa eletrik na-eche ihe ize ndụ nke ịbụ onye a ga - elebanye anya ma ọ bụrụ na ha emetụ ahịrị ike na - akpachapụghị anya ma ọ bụ kpọtụrụ sistemụ ọkụ. Maintenancechekwa mmezi na sistemụ ikuku dịpụrụ adịpụ nwekwara ike bụrụ ọrụ dị ize ndụ. Mgbe ị na-arụ ọrụ naanị enwere ohere dị ukwuu ịnọ n'ihe egwu nke a bụ n'ihi oke ihe egwu dị iche iche nke ụlọ ọrụ eletrik na-eweta, ịnata enyemaka na enyemaka na-abụkwa ọrụ siri ike ebe ọ bụ na ndị ọrụ anaghị arụ ọrụ. Ọtụtụ oge ịnweta nkwado ozugbo ma ọ bụ enyemaka ahụike nwere ike ịbụ n'ụzọ nkịtị ọdịiche dị n'etiti ndụ na-agbanwe obere na mmerụ ahụ na-egbu egbu. Ihe egwu ụfọdụ chere ihu bụ:
Nmehie site na ahịrị nke nwere ike ibute oku
Kọntaktị na ekwentị nwere ike ibute mkpọtụ ma gbaa ọkụ
Ọkụ ma ọ bụ mgbawa ebe ọkụ eletrik nwere ike bụrụ ebe mgbanye ebe enwere ike ịgba ma ọ bụ ihe mgbawa.
Dị ka onye were gị n'ọrụ, ọ bụ ọrụ gị iji hụ na emezuru ụfọdụ ihe ndị a iji hụ na ndụ adịghị mma. Ha bụ:
Ngwaọrụ eji ọkụ eletrik kwesịrị ekwesị maka ojiji
Ekwesịrị ijikọ njikọ USB ma ọ bụ di na nwunye iji jikọta ogologo eriri ọnụ, a ga-ezere nkwonkwo taped ha ga-ebute ọfụma.
Agaghị atọkwa ike dị nfe site na iji ihe ndị na-eme ka ihe ọ bụla daa
Industrylọ ọrụ mmanụ na gas: Thelọ ọrụ mmanụ dị ka ụlọ ọrụ eletrik chọrọ nlebara anya kwesịrị iche na nchekwa nke ndị ọrụ naanị ụlọ, a ga - enwerịrị nchekwa anya, mgbe ị na - enyocha pipeline na oghere ndị ahụ. Mgbuji na ọgịga so n'ụdị ụdị mmekpa ahụ ndị ọrụ na ngalaba na-ata. Offọdụ ihe egwu dị na ya mgbe a na-arụ ọrụ na ngalaba mmanụ na gas bụ:
Mgbapụta Hydrocarbon (nke a nwere ike imerụ ahụ ma dị oke egwu)
Ọkụ ma ọ bụ mgbawa na mberede
Ibelata nke nnukwu ihe
Ihe egwu ndị a akpọtụrụ aha na mbụ nwere ike ibute nnukwu mmerụ ahụ ma ọ bụ nwụọ n'ọnọdụ ụfọdụ, ọ bụrụ na onye ọrụ naanị ya na-eme ka ọ ka njọ ebe ọ bụ na ha nwere ike ịnwe mmerụ ahụ ma ọ bụrụ na anaghị elegara ya anya ngwa ngwa. Ndị ọrụ ụlọ naanị ha bụ ndị nsogbu nke ọrụ dịkarịsịrị iche, ha na-eche oke ihe egwu dịka ọsịsọ, njem, ọdịda, mbepụ na ọbụrụ ọkụ ga-egbu egbu. A na-ahụtakarị ụlọ na-agba mmanụ, n'akụkụ mmiri, na ọbụna ụlọ ọrụ dị ka ebe ihe mgbawa dị. Ebe ndị a na-ejupụtakarị na gas na-ere ọkụ, mist, uzuzu, mmiri mmiri ma ọ bụ ikuku nwere ike ibute nnukwu mgbawa. Site na ihe ndị a niile, ọ ghọrọ ihe dị oke mkpa na nzukọ a ga-eji ụfọdụ ngwaọrụ teknụzụ dịka iHelp nke ga - enyere aka na nkwukọrịta ụzọ abụọ na - eme ka ọ bụrụ ihe na - achọpụta ya. Companylọ ọrụ ahụ kwesịrị ịgba mbọ hụ na arụkwara ndị a ọrụ iji hụ na nchekwa nke ndị ọrụ naanị ha. Ha bụ:
Ntụle ihe ọghọm
Industrylọ ọrụ ọcha: ụlọ ọrụ ịdị ọcha metụtara ụlọ ọrụ ahụ ike ma na-ezo aka na nlekọta niile n'ụlọ na ebe a na-elekọta ndị agadi. Ndị ọrụ na-arụkarị ọrụ dị ka akụkụ nke otu. Enwere ike gbasaa ha mgbe ụfọdụ dika ọrụ ha na ọrụ ha ga-egwu, oge a ha na - abụ ndị ọrụ naanị ebe ọ bụ na onye ọ bụla kwesịrị ịrụ ọrụ nke ya mgbe naanị ya nọ. Ha na enweta nkwado izugbe site n'aka ndị ọrụ ibe ha mana nke a na-abụkarị n'oge ọrụ. Na mgbakwunye, ụlọ ọrụ ụlọ ọrụ nwere ike ịchọ ka ha soro onye bi na nnọkọ ma ọ bụ na njem ọpụpụ. Njem ndị a na-agụnyekarị owu na-ama ọrụ. N'ime ọrụ nlekọta ụlọ, ha na-enwekarị nsogbu ebe a na-etinyekarị ya n'ụlọ ndị ọrụ na-enweghị nkwado ozugbo site n'aka ndị ọrụ ibe ya na ndị nlekọta. Ihe egwu di na nd a gụnyere:
Ihe ọghọm nke ihe ọghọm, mmerụ ahụ ma ọ bụ ọbụna ọrịa na-arịwanye elu
Ihe ọghọm dịkwuo elu dịka ebe enwere ihe ike, ọrịa mberede, ọkụ ma ọ bụ ihe mberede ndị ọzọ
Ugbu a ahụla ihe egwu dị na ya, anyị na-agagharị ileba anya na ihe ndị nzukọ nwere ike ime iji hụ na ahụike ndị ọrụ emetụtaghị. Ọrụ onye were ya n'ọrụ bụ:
Ghọta ọrụ dịịrị ha dị ka onye were gị n'ọrụ
Gbaa mbọ hụ na emechara nyocha ihe egwu dị ma mejuputa atụmatụ ndị ahụ
Ijide n'aka na ndị ọrụ owu na-enwe ihe ha chọrọ na ọzụzụ
Nwee usoro iji mesoo ihe ọghọm ndị ọrụ mberede
Gbaa mbọ hụ na ha nyere ha ekwentị na akara ekwentị GPS iji meziwanye nkwukọrịta na ọrụ.
Industrylọ ọrụ ego: ụlọ ọrụ a metụtara ego na nsogbu gbasara ego, ndị ọrụ naanị ebe a na-enwekarị nsogbu na mbuso agha karịa ụdị ịma aka ọ bụla. Onwere mgbe nile echiche ndi mmadu kwenyere na onye obula ya na ego nwere ego ma obu nwee ike inye ha ohere inweta ego a. Nke a na-etinye ma ndị ọrụ na ụlọ ọrụ ego na-echekarị oge naanị ha nọ, ha na-apụnara ihe ma na-amaja ya na arịrịọ ha kwesịrị inye ego. Ihe egwu ndị a ewetarala ọtụtụ ndị ọrụ ụfọdụ anụ arụ na nke mmetụta uche dịka ha na-eche na nchekwa ha anaghịzi ekwe nkwa ozugbo ha na ụlọ ọrụ ego. Ihe egwu ụfọdụ ndị ọrụ a chere ihu bụ:
ndọkpụtọ si ebe ọrụ
na-arịọ ịbanye ụlọ ọrụ ego n'ike n'ike
Uzo ufodu nke ndi oru ha puru inye ha bu:
na-enye ngwaọrụ nkwukọrịta ha nwere ike iji kparịta ma kọọ onye ohi
na-enye ndị ahịa ka ha nyere ha aka ịchọta ndị ọrụ a n'ọnọdụ nke mgbagha site na ebe ọrụ
n’enye ndi oru ihe nkuzi nke nyere ha aka itu anya ma jikere maka onodu di otua
Industrylọ ọrụ inshọransị: ụlọ ọrụ inshọransị na-arụ ọrụ kachasị na n'ịhụ nkwụmọtọ megide ihe ndị ọdịnihu. Nke a pụtara na ha chọrọ onye ọrụ iji mee ka azụmahịa mkpuchi na-arụ ọrụ. Achọghị ọrụ na-abịa ebe a mgbe ha chọrọ onye ga-agwa ya ụlọ ọrụ ọzọ nke onye nwe ụlọ ọrụ ka ha jụọ ka ha mejupụta ụlọ ọrụ ya. Nke a nwere ike ịdị ka ọrụ dị mfe ma dịkwa nfe ime ga -eme ka ọsụsọ na -eme ọsụsọ, ọ naghị adị nhịahụ ka ị ghọta. Ọtụtụ oge ndị ọrụ a naanị ha ga-aga njem tere aka na ebe dị nso na ọtụtụ ọnọdụ na-eduga n'ọnọdụ ndị atụghị anya ha nwere ike ime. Enwere ike wakpo onye ọrụ naanị anụmanụ, enwere ya ohi, enwere ike imetọ ya n'ihi na ọ bụ mmadụ, ha nwere ike ịbanye n'ọnọdụ ndị dị ize ndụ ma ndị mmadụ n'otu n'otu nwekwara ike ịrịa ọrịa ma ọ bụdị tụfuo. Iji mezuo nke a, ọ dị mkpa na onye were ya n'ọrụ na-etinye ọtụtụ mmemme iji hụ na ha nyeere onye ọrụ ha aka ma chekwaa ya. Offọdụ n'ime ha bụ:
n’enye ụgbọ iji bufee ndị ọrụ ha ma ọ bụ ndị ọrụ naanị ha ebe ha nọ, ha nwere ike inweta ọkwọ ụgbọ ala nkeonwe nke a na - egbochi ụdị ihu na - adịghị mma.
nyocha ihe egwu dị na ọrụ
na-enye onye ọrụ ahụ ihe nkwukọrịta iji mee ka nkwurịta okwu dị mma na oge niile
site na iji GPS trackers ga - enyere aka ịmata ọnọdụ nke ndị ọrụ n'oge ọ bụla n'oge
ịnye ndị ọrụ na-arụ ọrụ naanị iji chebe onwe ha dịkwa ezigbo mkpa
Ulo oru ahia: Nchegbu dị ukwuu maka ndị na-arụ ọrụ na mpaghara ihe onwunwe (onye na-ere ahịa, ndị na-ere ụlọ na ndị na-ahụ maka ihe onwunwe, na-ahapụ ndị ọrụ) bụ nchekwa ha. Ọ bụ ọdịdị nke ụlọ ọrụ a na ndị ọrụ na-arụ ọrụ naanị ya - na ụlọ nke ndị ahịa ma ọ bụ ya na ndị na-azụ ahịa ma ọ bụ ndị na-azụta ụlọ, nke a na-eme ka ọ bụrụ ndị kachasị emerụ emerụ ahụ site n'omume na omume ndị ọzọ. Just maghị n’ezie ihe ị ga-achọ n’azụ ọnụ ụzọ ahụ. Naanị ịrụ ọrụ naanị na-eme ka ọghọm nke ọrụ ọ bụla dịkwuo njọ, maka ndị ọrụ nọpụrụ iche site na enyemaka na nkwado nke ndị ọrụ ibe, igbu oge na enyemaka enyemaka nke ụlọ ọgwụ ma ọ bụ ọrụ mberede nwere ike ịbawanye oke na nsonaazụ nke mmerụ ahụ. Agbanyeghị, ndị ọrụ ndị a anọghị n'ihe ize ndụ nke ndị ọzọ kamakwa ihe ọghọm okporo ụzọ, njem, ọrịa dara yana ọrịa mberede bụ ihe ọghọm dị mkpa ịtụ anya na ịkwadebe maka. Wa na-agbanwe ma enwere nsogbu dị egwu na-eche ebe ahụ. Ọ gaghị ekwe omume ịmara ebe ị na-aga ma ọ bụ ụdị ndị ị ga-ezute ebe ahụ. enwere ụzọ dị iche iche ị ga - esi mee ihe ụfọdụ n'ihe egwu a, ha bụ:
Anwakwala echedo nchekwa ma gharakwa iche na akụ nwere nchebe
Echekwala na onye ahịa ahụ nọ na nchekwa na enweghị nsogbu ọ bụla, ọrụ ahụ bụ ihe egwu
Onye were gị n'ọrụ kwesịrị inweta nkọwa zuru ezu banyere ndị ahịa
Ekwesiri inwe nọmba ịchọrọ ịkpọ ma ọ bụ mmadụ iji rute n'ọnọdụ mberede
A ga-azụrịrị ndị ọrụ na-akwụghị ụgwọ maka mkpa ọ dị idobe ekwentị oge niile, na mmadụ yana mgbe ọsịsọ ọsịsọ
Companylọ ọrụ ahụ kwesịrị ịnye usoro ọrụ dịịrị ọnụ maka ndị ọrụ ha, ahịrị ndị a kwesịrị inwe ike ịgwa ụlọ ọrụ, onye nlekọta ọrụ, ndị ọrụ ibe yana ndị uwe ojii.
Inye bọtịnụ egwu maka ndị ọrụ nwere ike ịdị oke mkpa dịka ọ ga - enwe ike ịgbalite njikere ịmụrụ anya.
Ekwesịrị inye ndị ọrụ a ọzụzụ ọzụzụ maka onwe ha
Rieslọ ọrụ ndị a niile nwere ihe egwu dị iche iche, mana ọ bụ ihe niile na teknụzụ kachasị na ngwaọrụ nkwukọrịta edozila ọtụtụ ihe egwu ndị a ka ndị ọrụ a ga-eche ihu. Agbanyeghị, onye ọrụ chọrọ iji uche ya mee ihe ma mara gburugburu ebe obibi ha. Ha aghaghi icheta na oru ha nwere otutu ihe egwu ma ha adighi agha ha ma hazie ya ozugbo. Nchekwa ndị ọrụ na njedebe, daba n'aka onye ọrụ na ndị were ya n'ọrụ
Nzuzo 2619 4 Echiche Taa